Ushise indodana nge-ayina ngenxa yesoka | isiZulu
Ushise indodana nge-ayina ngenxa yesoka
Umphakathi ushise umuzi wosolwa ngokubulala indodakazi
Umphakathi ushise umuzi kangqongqoshe ePitoli
Umphakathi ushise obesolwa ngokudlwengula izingane
Johannesburg - Kusabatshazwa unya nesihluku sowesifazane waseNanda, enyakatho yeTheku oshise indodana yakhe eneminyaka engu-9 ubudala nge-ayina ngoba ecasulwa wukuthi ikhohlwe wukudlulisa umyalezo esokeni lakhe.
Lona wesifazane ILANGA elingeke limdalule ukuvikela ingane, kuthiwa uyishise ebusweni nasentanyeni maqede wayigquma endlini amasonto amabili ingayi esikoleni ngoba engafuni ibonwe ngothisha.
Umthombo weLANGA uthi le ngane ibingaqali ukubhekana nesimo esifuze lesi kwazise ziningi izigameko lapho unina ebeyishaya esebenzisa isihluku.
Uthi kwesinye isigameko uke wayishaya ngebhodwe ekhanda kanti useke wayishisa ngamanzi abilayo.
Kuthiwa lona wesifazane zimkhalele ngoMsombuluko emini emuva kokuba amaphoyisa encinzwe indlebe ngesigameko sokushiswa kwengane nge-ayina.
Umthombo waleli phephandaba uthi lona wesifazane utshele indodana yakhe ukuthi uma kwenzeka kufika "uninalume" (isoka lakhe) amtshele ukuthi angahambi engakafiki.
"Lifikile isoka ingane yakhohlwa wukudlulisa umyalezo kanina. Esebuyile, ubuzile ukuthi like lafika yini usoka lakhe. Ingane imtshenile ukuthi ufikile kodwa yakhohlwa wukudlulisa umyalezo. Ucasukile wayishaya maqede wayishisa nge-ayina. Ngiyacabanga ukuthi lokhu ubekwenza ngoba engafuni bayibone esikoleni ukuthi uyilimaze kanjani," kusho umthombo.
Uthi indlela ingane elimele ngayo, kusalele umaka wezimbobo ze-ayina entanyeni.
Uhlebele ILANGA ukuthi lolu daba seluke lwabikwa phambilini kosonhlalakahle kodwa bathe uma beya kubo kwengane, bangayithola imininingwane ebingenza bayithathe.
OLUNYE UDABA: UZuma uzophendula imibuzo ePhalamende
"Okuvelile wukuthi le ngane ibingaqali ukuhlukunyezwa, kunesigameko lapho kuthiwa wayishaya ngebhodwe ekhanda kanti kunezinsolo zokuthi wenza lokhu nje, ubedle amponjwana. Kuphinde kwazwakala ukuthi uke wayithela ngamanzi abilayo le ngane. Njengoba engumuntu ophuzayo isikhathi esiningi, le ngane bese kuyimpilo yayo ukushaywa," kusho umthombo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthi bewuMnyango bayacela ukuba izingane zibikele othisha uma kukhona ukuhlukumezeka ezibhekana nakho, kungaba yisekhaya noma yisesikoleni.
"Kubuhlungu kakhulu ukuzwa udaba olunjena ngoba ukube ingane ibibika kothisha ngokuhlukumezeka, ngabe isizakale ngaphambi kokuba kuze kufike kulesi sigaba. Siyethemba ngoba udaba selusezandleni zomthetho ukuthi uzokwenza okufanele," kusho uMnu Mlotshwa.
UNkk Ncumisa Ndelu okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uthe bese bewutholile umbiko ngalolu daba wathi osonhlalakahle sebengenelele kanti ingane ithathiwe ngoba kusatshwa ukuthi kayiphephile.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe icala lokushaya ngenhloso yokulimaza wathi umsolwa ongunina wengane uzovela maduze enkantolo.